आन्तरिक तथा बाह्य पर्यटक लक्षित गर्दै होटलमा लगानी
भदौ २, रुपन्देही । रूपन्देही जिल्लाको तिलोत्तमा–५ मणिग्रामस्थित ड्रिमल्याण्ड गोल्ड रिसोर्ट प्रालिले यसै वर्ष रू.२० करोड लगानी थप गरी सेवा विस्तार गरेको छ । उक्त रिसोर्टले लगानी थप गरेसँगै पूर्वाधार तथा सेवा विस्तार गरेर चार तारे होटलका लागि स्तरोन्नति गरेको छ । उक्त रिसोर्टले चा...
कृषि उत्पादनमा फड्को मार्दै मकवानपुरगढी, दूधमात्रै दैनिक १० हजार लिटर विक्री
भदौ २, हेटौंडा । मकवानपुरगढी गाउँपालिकाबाट मासिक रू.३ करोड बराबरकोे दूध विक्री हुने गरेको छ । सहकारीमार्फत मात्रै दैनिक १० हजार लिटर दूध विक्री हुँदै आएको छ । संकलकमार्फत पनि दूध विक्री हुने गरेको छ । गाउँपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत भीम परियारका अनुसार सहकारी तथा संकलकमार्फत विक...
जुम्लाको अर्गानिक स्याउ नेपालगञ्जमा विक्री
भदौ २, नेपालगञ्ज । नेपालमा जुम्लाको स्याउको खुबै नाम छ । अर्गानिक भएकाले जुम्ली स्याउ प्रख्यात छ । जुम्ली स्याउको प्रमुख बजार नेपालगञ्ज हो । अहिले बजारमा जताततै जुम्लाको स्याउ विक्री भइरहेको छ । चीन र भारतको स्याउ बढी खपत हुने गरेको नेपालगञ्जमा अहिले जुम्लाको स्याउल...
ट्याङ्कर सडकमै पार्किङ हुँदा दुर्घटनाको जोखिम
भदौ २, भद्रपुर । नेपाल आयल निगमको चारआली कार्यालयमा पार्किङस्थलको अभाव हुँदा सदरमुकाम जोड्ने व्यस्त सडकनै ट्यांकरको पार्किङस्थल बन्न पुगेको छ । मेचीनगर–१३ चारआलीमा रहेको निगमको कार्यालयमा पेट्रोलियम पदार्थ बोकेका दैनिक ५० ओटासम्म ट्यांकर भित्रिने गरेका छन् । तेल अनलोड गरिसकेपछि खाली...
वाणिज्य बैंक भरतपुरमा आगलागी
भदौ २, भरतपुर । राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक भरतपुर महानगरपालिका–१० स्थित चौबीसकोठी चोकमा रहेको भवनमा सोमवार बिहान आगलागी भएको छ । बिहान ७ः३० बजेदेखि लागेको आगो डेढ घण्टामा नियन्त्रणमा आएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय चितवनका प्रहरी नायव उपरीक्षक एकनारायण कोइरालाले जानकारी दिए । दुई तले सो...
नगरपालिकाका विपन्न परिवारलाई निःशुल्क मिटरबक्स
भदौ २, जाजरकोट । नेपाल विद्युत् प्राधिकरण जाजरकोट वितरण केन्द्रले भेरी नगरपालिकाका विपन्न परिवारलाई निःशुल्क रूपमा विजुलीको मिटरबक्स वितरण गरेको छ । सो नगरपालिका को १, ३, ४, १०, ११, १२ र १३ वडाका विपन्न परिवारलाई ती वडा कार्यालयले गरेको सिफारिशका आधारमा ४९३ थान मिटर निःशुल्क रूपमा वितरण...
गाउँपालिकाले किन्न थाल्यो कृषि उत्पादन
सिन्धुली । जिल्लाको सुनकोशी गाउँपालिकाले कृषकहरूले उत्पादन गरेको सम्पूर्ण कृषि उत्पादन खरीद गर्ने भएको छ । कृषकहरूले कृषि उत्पादन विक्रीमा समस्या भएको गुनासो गरेपछि गाउँपालिकाले नै कृषि उत्पादन किन्न थालेको हो । गाउँपालिकाका सातओटै वडामा कृषि संकलन केन्द्र स्थापना गरी दैनिक रूपमा कृषि उत्पा...
माथिल्लो चमेलिया जलविद्युत्को निर्माण कात्तिकदेखि
धनगढी । माथिल्लो चमेलिया जलविद्युत् आयोजनाको निर्माण आगामी कात्तिकदेखि शुरू हुने भएको छ । आयोजना निर्माणका लागि कानूनी प्रक्रियाहरू सम्पन्न भइसकेकोले अब लगानीका लागि बैंकहरूसँग आवश्यक छलफल भरहेको निर्माण कम्पनी अपि हाइड्रो पावरका निर्देशक महेन्द्र न्यौपानेले बताए । दार्चुलास्थित ४० मेगावाटको उक्त...
२ करोड ३२ लाख राजस्व संकलन
रौतहट (अस) । घरेलु तथा साना उद्योग कार्यालय रौतहटले गत आर्थिक वर्ष २०७५/७६ मा २ करोड ३२ लाख रुपैयाँ राजस्व संकलन गरेको छ । उद्योग दर्ताबाट ८७ लाख ९४ हजार र वाणिज्य प्रशासनतर्फ प्राइभेट फर्म खरीद विक्रीबाट १ करोड ४३ लाख ७५ हजार र धरौटी जफतबाट ५० हजार रुपैयाँ संकलन भएको छ । सो अवधिमा ८९२ ओटा...
घोराहीमा अर्गानिक कृषि उत्पादन शुरू
घोराही । दाङको घोराही उपमहानगरपालिकामा अर्गानिक कृषि उत्पादन शुरू गरिएको छ । उपमहानगरको वडा नं. १ र २ मा पर्ने रामपुर गाउँमा यस वर्षदेखि अग्र्यानिक कृषि उत्पादन थालिएको हो । पहिलो चरणमा ११३ घरका किसानले काँक्रोखेती गरेका र पहिलो लटमा रू. ४ लाख ५२ हजारको काँक्रो विक्री गरेको पर्यावरणीय दिगो विकास...